Tallaabada 3: Wareysiga – Asylum – JRS Romania
Waxaa laguu ballaminayaa wareysi uu kula yeelanayo sarkaal ka tirsan hay’adda laanta socdaalka (GII, ama IGI ee Romania), caadiyan maalmo kadib wareysiga horudhaca ah.
Taariikhda wareysiga ayaa laguu soo sheegi doonaa ka hor. Wareysiga waa talaabada ugu muhiimsan nidaamka magan galyada. Waa inaad ka soo qeyb gashaa; haddii kale sarkaalka GII / IGI ma awoodi doono inuu go’aan ka gaaro kiiskaaga.
Ma heli doonaa turjubaan / turjubaan inta lagu guda jiro wareysiga?
Wareysiga waxaa lagu qaban doonaa luqaddaada ama luqad aad ku dhawaaqday inaad si fiican u taqaan. Waxaa kaa caawin doona turjubaan / turjubaan bilaash ah. Turjubaanka ayaa u joogi kara oo kaliya inuu turjumo wada hadalka u dhexeeya adiga iyo sarkaalka. Haddii aadan la xiriiri karin tarjumaanka, ama adaan fahmin asaga / ayada, ama wax shaki ah aad ka qabtid tarjumadiisa / eeda, tan u sheeg sarkaalka GII / IGI. Waxaad wareysi cusub la yeelan doontaa turjubaan kale.
Inta lagu jiro wareysiga, sarkaalku wuxuu ku weydiin doonaa su’aalo faahfaahsan oo ku saabsan sababta aad uga soo carartay wadankaagii hooyo iyo waxa dhici doona haddii aad halkaas ku laabato. Waa inaad si faahfaahsan u sheegtaa (si sax ah) wixii kugu dhacay iyo qataraha aad ka cabsaneyso. Way adkaan kartaa in laga hadlo qibradaha qaarkood, laakiin waxaa aad muhiim u ah in aad ahaato qof daacad ah oo aad runta ka sheegto xaaladdaada, oo aad caddeyso wixii khilaafaad ah ee ka dhex jira sheekadaada.
Sarkaalku wuxuu qori doonaa dhammaan su’aalaha iyo dhammaan jawaabaha iyo faahfaahinta aad bixiso. Macluumaadka oo dhami wali waa qarsoodi. Dhamaadka wareysiga, turjubaanka ayaa kuu turjumi doona dhammaan wixii uu sarkaalku qoray. Waxaad fursad u leedahay inaad saxdo wixii khaladaad ah. Haddii aad ku raacsan tahay waxa la qoray, waxaad saxeexi doontaa bog kasta ee qoraalka waraysiga waxaadna heli doontaa nuqul. Haddii aadan oggolaan, weydii sarkaalku inuu beddelo qoraalka. Waxaad saxeexi doontaa qoraalka dhammaadka, kaliya kadib marka uu sarkaalku beddelo oo turjumaanku caddeeyo isbeddelada.
Ma keeni karaa wax dukumenti ah?
Waxaad soo bandhigi kartaa wixii dukumiinti ah ama caddeyn taageeraya dalabkaaga. Muhiim maahan in dokumentiyada ay ahaadaan kuwo ku qoran luqadda Romania, laakiin waxaa lagama maarmaan ah inay iyagu la xiriiraan sababahaaga magangalyada.
Wareysiga wuxuu socon karaa dhowr saacadood, iyadoo kuxiran kiis kasta. Hadaad jeceshahay inaad nasiino hesho, u sheeg sarkaalka.
Yaa iga caawin kara inta lagu gudajiro wareysiga?
Waxaad xaq u leedahay in lagu caawiyo wareysiga, oo lacag la’aan ah, oo ay kuu fidiso hay’ad samafal ama UNHCR. Haddii aad jeceshahay in lagu caawiyo NGO ama UNHCR, waa inaad codsataa. Waxaa kale oo kaa caawin kara garyaqaan adiga naftaada ku siisay.
Weydiiso talo iyo macluumaad ku saabsan sida wareysigu u dhacayo iyo xuquuqahaaga iyo waajibaadkaaga inta lagu jiro wareysiga kahor waqti fiican. Riix HALKAN si aad u hesho faahfaahinta xiriirka ee ururada kaa caawin kara.